Ny fomba nanentanana azy ireo hamorona maherifo | Famoronana an-tserasera
Rehefa manomboka kahie na diary vaovao dia maka sary an-tsaina zavatra an'arivony hiasa izahay. Raha manandrana mamorona tantara na sary isika dia mitady toetra vaovao. Tianay ary mino izahay fa ho baomba izany raha tiantsika. Ary amin'ny farany dia tadiavinay ho tonga olo-malaza amin'ny sarimihetsika ara-tantara ny kisarisarinay mahazatra. Izany no tsy maintsy noeritreretin'ireo creatives izay nanao maherifo malaza indrindra. Handika azy ireo amin'ny tantara an-tsary izay tiantsika izao.
Betsaka amin'izy ireo no efa fantatsika ary hitantsika fa mahazatra loatra izy ireo ka toa tsotra. Batman, misy mahalala fa ramanavy izy, hala ny hala ary ilay pantera mainty dia pantera mainty. Ireto misy ohatra vitsivitsy momba izay ho hitantsika eto sy ny fomba nanentanan'izy ireo aingam-panahy avy amin'ny zavatra iray izay toa mora ankehitriny.
2 manontany tena Woman
3 Panther mainty
Spider-Man dia nanomboka tamin'ny Amazing Fantasy # 15 tamin'ny 1962. Nosoratan'i Stan Lee sy Steve Ditko izy io. Vetivety dia namboarina ho an'ny haino aman-jery isan-karazany ny toetrany. Izay ahitana ny mozika Broadway lafo indrindra hatreto dia Spider-Man: vonoy ny maizina.
Ny aingam-panahy ho an'ny akanjo Spider-Man dia avy amina loharano iray tsy azo inoana. Betsaka no mino fa ny akanjo anaovan'ny maherifo malaza dia nitaona ny fitafiana Halloween ankizy 1954 noforonin'i Ben Cooper Inc. Spider-Man tsy manam-paharoa satria talohan'ny taona 1960 dia nahena ho amin'ny anjara toerany ireo mpilalao tantara an-tsarin'ny zatovo. Tsy nanaiky an'io fitsipika io i Stan Lee ary nametraka tsindry betsaka tamin'ny mpihetsiketsika tanora iray.
Wonder Woman no mahery fo malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra ary efa fampiasa vehivavy nanomboka tamin'ny 1941, fony izy nanao ny laharana voalohany tamin'ny All-Star Comics # 8. William Morton Marston no namorona azy ary namboarina ho modely vaovao amin'ny maha vehivavy maha-be herim-po azy.
Wonder Woman dia tiana noho ny hafainganam-pandehany mahery sy mahery, ny fehin-tànana misy bala sy ny Golden Lasso of Truth izay manampy azy hiady amin'ny fankahalana eto amin'izao tontolo izao misy antsika. Nahazo aingam-panahy ny ampahany tamin'ny pejy afovoany Varga Girl tao Esquire izay hitan'i Marston ho "erotika" sy "cosmopolitan." Ny fitafiany dia avy amin'ny fahalianan'i Marston amin'ny zavakanto pin up erotika, satria tiany ny bika aman'endriny mba hanampy amin'ny fanoherana ny maha-lehilahy mahery ny endri-tantara mahatsikaiky.
Ny Black Panther dia niseho voalohany tamin'ny Marvel's Fantastic Four No. 52 tamin'ny 1966. Izy no mpilalao tantara an-tsary mainty voalohany.. Noforonin'i Stan Lee sy Jack Kirby izy io. Raha ny filazan'ny mpanoratra Stan Lee, ny anaran'ilay mpilalao dia mifototra amin'ny maherifo mpiambina izay manana pantera mainty ho mpanampy. Ny kanto fiheverana tany am-boalohany dia mitondra ny lohateny hoe "Arina Tiger."
Telo volana teo ho eo taorian'ny nanombohan'ny mpilalao Black Panther tao amin'ny Marvel Marvel dia notontosaina ny Black Panther Party. any Oakland, Kalifornia. Na izany aza, ny sary famantarana Black Panther avy teo alohan'ilay antoko, Lowndes County Freedom Organization, dia novokarina herintaona talohan'ny famoahana ilay tantara an-tsary.
Storm dia noforonin'i Len Wein sy Dave Cockrum. Niseho voalohany tao amin'ny Marvel univers in Giant Size X-Men # 1 tamin'ny 1975. I Len Wein no nanoratra ny toetra amam-panahy ary notarihin'i Dave Cockrum. Tany am-boalohany natao ho mahery fo lahy, Storm dia miorina amin'ny endri-tsoratra roa samy hafa izay tokony ho anisan'ny tantara an-tsary Legion of Superheroes: Typhoon and Black Cat
Storm dia iray amin'ireo maherifo mainty manan-danja indrindra. Noho izany dia zava-dehibe tamin'ny tantara X-Men izy hatramin'ny voalohany. Izy koa dia iray amin'ireo mahery fo mahery indrindra amin'ny tontolon'ny Marvel.
Taorian'ny fahombiazan'ny Superman, DC Comics dia te-hamorona mahery fo vaovao. Izany dia natolotry ny mpanoratra tantara an-tsary sy mpanakanto Bob Kane ary mpanoratra Bill Finger hampivelatra ny iray. Niteraka ny nahaterahan'i Batman, mahery fo iray izay tsy nanana hery mihoatra ny natiora, fa kosa nanana gadget isan-karazany mahaliana, anisan'izany ny fehikibo fitaovana sy fitaovam-piadiana faneriterena. Batman dia niseho voalohany tao amin'ny Detective Comics # 27 tamin'ny 1939.
Batman dia nahazo aingam-panahy tamin'ny fitambaran'ny Sherlock Holmes, Zorro, ary ny sary nataon'i Leonardo da Vinci milina manidina manana elatra ramanavy. Ireo mpamorona dia nahazo tsindrimandry avy tamin'i Dracula sy The Bat, sarimihetsika mangina tamin'ny 1926.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ny fomba nanentanana azy ireo hamorona maherifo